7 mafomu eecommerce yako | ECommerce nhau
7 mafomu eecommerce yako
Jose Ignacio | | Analytics, CRM uye Big Data, eCommerce
Kana iwe uri kufunga nezve kutanga online chitoro, kana pamwe iwe watove wakanyudzwa mune ino maitiro, iwe unofanirwa kuziva kuti parizvino une hwakawanda hwakawanda hwekushandisa hunogona kubatsira zvakanyanya kune yako ecommerce. Ivo vakapararira mu misika kuitira kuti iwe ugone kuzvishandisa, pamwe neakateedzana ezve zvipo izvo zvinogona kunakidza kwazvo kune ako mabhizinesi mapurojekiti.
Zvichienderana nechipo, hapana mubvunzo kuti unogona elegir ivo yeprojekti yako zvinoenderana neuyo unokodzera zvakanyanya zvido zvebhizinesi rako uye wadii kuzvitaura nezve webhusaiti inomiririra kune vashandisi kana vatengi. Isu tiri vazhinji uye vazhinji vatori vechikamu mukubuda kwatinenge tichigadzira takatarisana nekutengesa zvemagetsi uye nekudaro izvi zvitsigiro zvinodiwa kuti iwe ugone kupa makuru masevhisi kune vese vatengi vako kana vashandisi kubva kune yechokwadi nzira nzira kubva kune ese maonero maonero.
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kune yakakura chikamu chinogadzira maapplication ezvitoro zvepamhepo uye nekudaro nyika nyowani nyowani yemikana inovhurika. Kwamunogona kuwana kubva panguva dzino huwandu hwakawanda hwezvinogadzirisa dambudziko ratisingazive kuti rine mhinduro. Kana pane zvinopesana, ita basa mune yakawedzera nzira kuti iwe ugone kusimudzira yako yehunyanzvi chiitiko pasina kunyanyisa kuedza kwako.
1 Blog apps
5 Kit pane vezvenhau
6 Hootsuite inosangana neyemagariro enhau maakaunzi
WordPress ndiyo yakanyanya kupararira CMS (Zvemukati maneja Sisitimu) pasirese. Iyo yemahara yemukati manejimendi manejimendi iyo inoshandiswa kunyanya kugadzirwa kwemablog uye mablog. Iko kune izwi rezwi kune akanyanya maeophytes ayo asingade programming ruzivo uye anosanganisira pre-yakasimbiswa dhizaini. Neimwe wordpres zvinhu zvinoshanduka, unogona kuzviisa pane yako wega yekutambira uye shandisa template yaunoda. Yako webhusaiti kana blog ichave yakasarudzika zvachose. Kunyangwe wordpress yakanakira mawebhusaiti uye mablog. hazvisi zvakanyanya kune ecommerce. WordPress ecommerce plugins inogona kudonha kana kudiwa kweako online chitoro kunowedzera.
Chero zvazvingaitika, chishandiso ichi chinogona kukupa iwe kuoneka kukuru mumutsara webhizinesi rako kubva zvino zvichienda mberi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti inopa rutsigiro kushambadzira chitoro kana dhijitari yekutengesa pakati pevanogona kuve vatengi kana vashandisi. Kuburikidza nemhando yepamusoro yezvinhu izvo zvinonyatso batsira kuzadzisa zvinangwa zvekugutsikana kuzere kwemativi ese anoita maitiro aya.
Kungave iko kunyorera kwausingazive kwazvo, asi kubva zvino zvichienda kunogona kukupa iwe kutamba kwakawanda mubhizinesi redhijitari rainaro. Kunyanya nekuti inogona kukwidziridza ecommerce yako kuburikidza nemufananidzo. Zviri nyore uye haufanire kunetseka nezve zvimwe zvakaomarara uye kunyange zvakaoma kuita marongero. Mune izvi, vashandisi vanoisa iwo mufananidzo wechigadzirwa chavari kutsvaga. Kusvika pakuti ivo ndivo vanozopedzisira vabatsira vamwe vashandisi kuwana chigadzirwa kana chinhu chavanokumbira.
Naizvozvo, sisitimu yavo yakavakirwa pane chimwe chinhu chiri nyore kunzwisisa sekukanda mafoto akasiyana siyana anokanganisa veruzhinji. Mhedzisiro yaro haifanire kumirira kwenguva yakareba nekuti imwe yeakanyanya kukosha ndeyekuti iwe unokwanisa kuzviisa pacheji rino. Saka kuti iwe upe kuonekera kwakawanda kune rako repamhepo bhizinesi uye semhedzisiro, kusvika kune yakakura nhamba yevatengi kana vashandisi. Sezvauchaona kubva zvino zvichienda mberi, zvinoenderana nezano rekare sekushandisa zviwanikwa zvinopihwa ne audiovisual zvinhu uye pamusoro pezvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi.
Ehezve, kana uchitaura nezvekushandisa, zvirokwazvo iyi ndiyo imwe iyo isingafanire kushayikwa chero nguva muchitoro chako chepamhepo. Iyo yemahara Anwendung inochengetwa neGoogle uye pamusoro pezvose inounza nemhando dzakasiyana masevhisi uye mabhenefiti ayo asingaburitse chero mutengo. Analytics inosangana chaizvo neecommerce, nekuti mairi iwe unowana iwo ekushandurwa ekuzivisa magirafu uye chiteshi manhamba. Aya maitiro maviri anotendera iwe kuti uzive mashandisiro anoita mushandisi pane rako peji uye panoshanduka nzira yekutendeuka.
Kubatsira kwayo ecommerce kunopfuura kuratidza uye uchafanira kungoishandisa nenzira chaiyo uye pamusoro penzira dzese dzeruzivo. Inogona kukubatsira kuti uzviise wega pawebsite yako kuitira kuti mutsara webhizimusi rako ubudirire kupfuura zvimwe zvese. Kunyangwe izvi zvichizonyanya kudikanwa kuti iwe uise zvemhando yepamusoro zvemukati uye kana zvichibvira kuti zviperekedzwe nezvimwe zvinoonekwa midhiya, senge mifananidzo, mavhidhiyo kana magirafu. Saka kuti mhedzisiro iri pakupedzisira izvo iwe pachako unotarisira kubva kune aya chaiwo nguva.
Mukati mechirongwa chekare, ichi ndicho chimwe chekushandisa chingangokodzera kuchisanganisira mune yako yekutanga runyorwa. Mune ino kesi, iri Anwendung iyo inokumbira iwe kuti ubhadhare pakuki yega yega kunoitwa nemushandisi, kusvikira iwe wavhara bhajeti iwe yawakabhadhara pakutanga. Nekudaro, AdWords ine chishandiso chinokutendera iwe kuti uzive icho chiri chinonyanya kudiwa chigadzirwa uye mazwi akakosha kuitira kuti uve neruzivo maererano neyako ecommerce.
Izvo zvakare zvinobatsira kwazvo pamapeji ewebhu echitoro chako kana bhizimusi repamhepo uye zvinogona zvakare kukubatsira iwe kugadzirisa yako position Hazvishamise kuti chishandiso icho chinoshandiswa kupa yakashambadzirwa kushambadzira kune vanogona kushambadzira. Naizvozvo, iwe unogona kuwana mabhenefiti emari kubva panguva yekuitwa kwayo uye izvo zvinoshandiswa nevazhinji vevashandisi vakazvipira kune ino nyanzvi basa.
Kit pane vezvenhau
Panguva ino, chishandiso chinowanikwa kunzvimbo dzekudyidzana hachigone kushaikwa uye ichi chingangove chimwe chezvisingazivikanwe kupfuura zvese. Asi inobatsira zvakanyanya kune zvido zvechitoro kana bhizinesi repamhepo nekuda kwekusimudzira kunogona kuitwa mavari. Chikonzero cheiyi sarudzo yakasarudzika ndechekuti irwo rutsigiro runoshanda kwazvo kubata shambadziro dzaunoita paFacebook ne Instagram nenzira yakapusa. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuvaita kuti vabatsire zvirinani zvirinani kupfuura kusvikira zvino.
Imwe yemhedzisiro huru yainogadzira ndeyekuti pakupedzisira ichakuchengetedza iwe wekushambadzira mushandirapamwe uye nekudaro manejimendi ayo achange achinyanya kushanda kupfuura pakutanga. Unogona kutarisa kushambadza uko kunogadzira mashandiro akanaka uye pane zvinopesana izvo zvisina basa kune yako mutsara webhizinesi. Nekuvimbika mune iyo data iyo inofanirwa kutariswa mukutungamira kwewebsite yechitoro chako chepamhepo. Kunyanya kana iwe uchivimba zvakanyanya pane yekushambadzira midhiya yeaya maitiro uye ndiko kuti, mushure mezvose, chinangwa cheichi chishandiso pasocial network.
Nepo kune rimwe divi, iwe zvakare unofanirwa kukoshesa kubva ikozvino pane chokwadi chekuti iwe unogona kutora mukana wemabasa ayo kubatana nevatengi vatengi vanofarira kutenga zvigadzirwa zvako. Nesarudzo iri imwe yeanonyanya kushanda aunogona kuwana panguva ino muchikamu. Kwete pasina, usakanganwa kuti zvave zvakakosha kusimudzira chitoro chepamhepo senge chauinacho iwe pachako. Pamusoro pevamwe vanozivikanwa zviri nani nevashandisi uye vanounza mashoma mabhenefiti pane aya.
Hootsuite inosangana neyemagariro enhau maakaunzi
Ichi chimwe chishandiso chakanakisa chakabatana nemaneja enharaunda uye nebasa raro rinonyanya kubatanidza yako Facebook, Twitter, maLinkedin maakaundi, nezvimwe. Saka kuti nenzira iyi, iwe unokwanisa kubata nehunyanzvi hunyanzvi mukutarisira kweako profiles profiles kuvandudza kuiswa kweako emagetsi commerce. Sezvo huwandu hwakanaka hwemakambani huri kuita mumakore achangopfuura nekuti kune zvakawanda mabhenefiti ayo aanogona kukupa iwe kubva kuiyi chaiwo nguva.
Icho chishandiso chisina kunyatso kuzivikanwa nevashandisi, asi mukudzoka chinopa akawanda mabasa iwe aunogona kubatsirwa nawo. Zvekuti basa rako rehunyanzvi riri kuramba richionekwa kune vashandisi vatsva vane mukana wekusangana newe. Kunyanya kwenguva dzekutanga apo rako bhizinesi diki kana repakati-saizi riri kusimukira paInternet. Iko zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti iwe unogona kusanganisa ichi chishandiso nevamwe vanogona kuchizadzisa mumabasa acho.
Chero zvazvingaitika, usakanganwa kuti SEO ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvewebsite yako kuve netraffic. Uye ichi chishandiso chakasimba chehunyanzvi kuti uzviite, asi kwauchazofanira kuisa chimwe chinhu pachikamu chako kusimudzira chitoro chepamhepo nenzira kwayo uye pamusoro penzira dzese dzenjere. Sezvo iri pakupera kwezuva zvazviri kuburikidza nechishandiso chisingafanirwe kushayikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Analytics, CRM uye Big Data » 7 mafomu eecommerce yako
Yakanakisa SEM zano reecommerce
Nei uchibatsiridza chitoro chevatengesi neCommerce?